I-Fosaprepitant Dimeglumine isebenzisa unyango lweziyobisi zamachiza AASraw
/Blog/Fosaprepitant Dimeglumine/I-Fosaprepitant Dimeglumine isebenzisa unyango lweziyobisi zamachiza
ezaposwa ngomhla 06 / 18 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Fosaprepitant Dimeglumine. Ibe 1 Comment.
1.Yintoni iFosaprepitant Dimeglumine
2.Isixa seFosaprepitant Dimeglumine
3. Olunye ulwazi olubalulekileyo kwiFosaprepitant Dimeglumine
5. Imiphumo emibi yeFosaprepitant Dimeglumine
6.Fosaprepitant Dimeglumine Izicwangciso & Indlela yokuSebenzisa
7. I-Fosaprepitant Dimeglumine Drug Interactions
8.Fosaprepitant Dimeglumine Imibuzo ebuzwa rhoqo
I.Fosaprepitant dimeglumine (EMEND) powder Abalinganiswa basisiseko:
1.Yintoni iFosaprepitant Dimeglumine?
Fosaprepitant Dimeglumine isetyenziselwa ukuhlambalaza nokuhlanza okubangelwa unyango lweziyobisi kunye nezinye iimeko. Le tyuwa ingasetyenziselwa iinjongo ezingabhalwa kule khowudi yeyeza.
Intravenous fosaprepitant dimeglumine (Ukumisela® for injection, IVEmend®; ukususela ngoku kuthiwa yi-fosaprepitant) yi-prodrug kwaye iguqulwa ngokukhawuleza kwi-aprepitant ye-antiemetic, kwaye ivunyiwe kumazwe amaninzi kwihlabathi jikelele (njengenxalenye yesiganeko se-antiemetic) ekuthintela isicupucu kunye nokuhlanza okuhambelana ne-chemotherapy ephezulu kunye neyenzo-emetogenic (i-HEC) no Mphathiswa). Ukuhlaziywa kwengxelo kuxoxwa ngezinto eziphathekayo ze-pharmacological ze-fosaprepitant kunye ne-clinical effectiveness kunye nokunyamezela ekukhuseleni isicaphulo kunye nokuhlanza okuhambisana ne-HEC kunye noMphathiswa wePhondo. Kwizilingo ezinkulu, izilingo zesigxina ze-phase III ezingaqhelekanga, enye i-fosaprepitant i-150 mg yayinomlinganiselo osebenzayo kwaye wanyamezela ngokuqhelekileyo kwi-regimen ye-antiemétique eyayibandakanya i-dexamethasone kunye ne-serotonin i-5-HT3 yokumelana nomdlali kwizigulane zomdlavuza omdala ezithatha unyango kunye ne-HEC okanye i-MEC . Kwakungenjalo ukungabikho komgangatho kwi-regimen ye-aprepitant yomlomo kwisigulane somdlavuza omdala owela unyango lwe-HEC. Iprofayili yokunyamezela kwi-regimen esekelwe kwi-regimen yayingumzekelo wolu hlobo kwizigulane ezifumana i-chemotherapy emetogenic, kwaye iziganeko ezimbi zivame ukuhambelana nezo zifunyenwe kwi-regimen esekelwe kwi-regimen. I-Fosaprepitant inikezela ngokubalulekileyo kwimiqathango yonyango lwe-antiemetic.
I-Formula ye-Molecular: C23H22F7N4O6P.2C7H17NO5
I-Melt Point: 242-247 ° C
2.The Isisombululo seFosaprepitant Dimeglumine
I-115 mg injection (irejimen ye-dosing yosuku lwe-3)
I-emetogenic yomhlaza khemotherapy Abantu abadala
IV I-Fosaprepitant 115 mg ngosuku 1 kuphela njengokungeniswa kweminye imizuzu ye-15, imizuzu ye-30 phambi kwe-chemotherapy. I-Aprepitant 80 mg ngomlomo kufuneka ilawulwe ngeentsuku ze-2 kunye ne-3. I-Aprepitant 125 mg ngomlomo ingafakwa endaweni ye-fosaprepitant 115 mg IV ngosuku 1. Ukulawula ngokubambisana ne-corticosteroid (dexamethasone 12 mg ngomlomo we-30 imizuzu phambi kwe-chemotherapy ngosuku lwe-1 kunye ne-8 mg ngomlomo ekuseni ngeentsuku ze-2 nge-4) kunye ne-5-HT 3 umphikisi (ondansetron 32 mg IV IV imizuzu ye-30 ngaphambi kwekhemotherapy imini 1).
IV I-Fosaprepitant 115 mg ngosuku 1 kuphela njengokungeniswa kweminye imizuzu ye-15, imizuzu ye-30 phambi kwe-chemotherapy. I-Aprepitant 125 mg ngomlomo ingafakwa endaweni ye-fosaprepitant 115 mg IV ngosuku 1. I-Aprepitant 80 mg ngomlomo kufuneka ilawulwe ngeentsuku ze-2 kunye ne-3. Ukulawula ngokubambisana ne-corticosteroid (dexamethasone 12 mg ngomlomo we-30 imizuzu phambi kwe-chemotherapy ngosuku lwe-1) kunye ne-5-HT 3 umphikisi (ondansetron 8 mg ngomlomo 30 ukuya kwii-60 imizuzu phambi kwe-chemotherapy kunye ne-8 h emva komthamo wokuqala ngosuku 1) .150 mg injection (irejista ye-single-dose regimen)
IV Fosaprepitant 150 mg ngosuku 1 kuphela njengokungeniswa kwe-20 kumzuzu we-30, imizuzu ye-30 phambi kwe-chemotherapy. Ukulawula ngokubambisana ne-corticosteroid (dexamethasone 12 mg ngomlomo nge-30 imizuzu ngaphambi kwekhemotherapy ngosuku lwe-1, i-8 mg ngomlomo ngosuku lwe-2, kunye ne-8 mg ngomlomo kabini imihla ngemihla kwi-3 kunye ne-4) kunye ne-5-HT 3. i-ondansetron 32 mg IV 30 imizuzu phambi kwe-chemotherapy ngosuku lwe-1).
I-3. Enye iNgcaciso ebalulekileyo kwiFosaprepitant Dimeglumine
(1) Ulahlekelwa ngumthamo
Ukuba uthe waphoswa umthamo, sebenzisa ngokukhawuleza xa uqaphela. Ukuba sisondele kwithuba lakho elilandelayo, weqa idosi ephosakeleyo uze uphinde uqhubeke neshedyuli yakho ye-dosing. Ungasebenzisi i dose eyongezelelweyo ukuze wenze idilesi ephosakeleyo. Ukuba uhlala ulahleka amayeza, cinga ukubeka i-alamu okanye ucele ilungu losapho ukuba likukhumbuze. Nceda uqhagamshelane nogqirha wakho ukuxoxa ngenguqu kwishedyuli yakho ye-dosing okanye ishedyuli entsha yokwenza amanani angaphoswanga, ukuba ulahlekelwe amanani amaninzi kutshanje.
(2) Ngaphezulu kweFosaprepitant Dimeglumine
Ungasebenzisi i dose engaphezulu. Ukuthatha amayeza amaninzi ngeke kuphucule iimpawu zakho; kunokuba zibangele ubuthi obubi okanye iziphumo ezibi kakhulu. Ukuba ukrokrela ukuba wena okanye nabani na umntu onokudlula iFosaprepitant Dimeglumine, nceda uye kwisebe eliphuthumayo kwisibhedlele esiseduze okanye kwikhaya lononophelo. Nika ibhokisi yeyeza, isitsha, okanye ubhalele kunye nawe ukunceda oogqirha ngolwazi oluyimfuneko.
Musa ukunika amayeza akho kwabanye abantu nokuba uyazi ukuba banesimo esifanayo okanye kubonakala ngathi banokuba nezimo ezifanayo. Oku kunokukhokelela ekudlulelweni kwexesha.
Nceda uqhagamshelane nodokotela wakho okanye umkhompiki okanye umkhiqizo wemveliso ukuze uthole ulwazi oluninzi.
(3) Ukugcinwa kweFosaprepitant Dimeglumine
Gcina amayeza kwindawo yokushisa kwegumbi, kude nokushisa nokukhanya ngqo. Ungafaki amayeza ngaphandle kokuba kufunwa ifakwe kwiphakheji. Gcina amayeza kude nabantwana kunye nezilwanyana.
Musa ukucoca amayeza kwizindlu zangasese okanye uwathulule emanzini ngaphandle kokuba ulandelwe ukwenza njalo. Amachiza alahlwe ngale ndlela angangcolisa imo. Nceda uqhagamshelane nekhemistiki okanye ugqirha ukuze uthole iinkcukacha ezingakumbi malunga nendlela yokukhusela ngokukhuselekileyo iFosaprepitant Dimeglumine.
(4) Iphela yeFosaprepitant Dimeglumine
Ukuthatha isantya esisodwa sokuphela kweFosaprepitant Dimeglumine akunakwenzeka ukuvelisa isiganeko esibi. Nangona kunjalo, nceda xubusha nomboneleli wakho wezempilo oyintloko okanye ukhemistiya ngcebiso efanelekileyo okanye ukuba uziva ukhululekile okanye ugula.
Isiyobisi esiphelelwe yisikhathi sinokungaphumeleli ekuphatheni izimo zakho ezimiselweyo. Ukuze ube kwicala elikhuselekileyo, kubalulekile ukuba ungasebenzisi iziyobisi eziphelelwe yisikhathi. Ukuba unesi sifo esingapheliyo esidinga ukuthatha amayeza rhoqo njengentliziyo yesimo, ukuxhatshazwa, kunye nokukhathazeka kwingozi yokuphila, unokugcinwa ngokukhuselekileyo kokunxibelelana nomboneleli wakho wonyango lwempilo ukuze unakho ukufumana uncedo olutsha lwezonyango ezingalindelekanga.
Ulwazi oluchanekileyo olunxulumene nokusetyenziswa kwe-Fosaprepitant Dimeglumine, iimpembelelo zangasese, ukuphononongwa, imibuzo, ukusebenzisana kunye nokuqapha ngolu hlobo lulandelayo:
I-Fosaprepitant Dimeglumine isetyenziselwa unyango, ukulawula, ukuthintela, nokuphuculwa kwezifo ezilandelayo, izimo kunye neempawu:
Isihlunu kunye nokuhlanza obangelwa ngumhlaza weyeza
I-Fosaprepitant Dimeglumine ingasetyenziselwa iinjongo ezingaboniswa apha.
5.Fosaprepitant Dimeglumine Imiphumo emibi
Oku kulandelayo uluhlu lweempembelelo zecala ezingenzekayo ezinokuthi zenzeke kumayeza aqulethe iFosaprepitant Dimeglumine. Olu alukho uluhlu olubanzi. Ezi ziphumo zecala zinokwenzeka, kodwa akusoloko zenzeka. Ezinye zeempembelelo zecala zingenakunqabile kodwa zinzulu. Buza ugqirha wakho ukuba ubona naziphi na ezi ziphumo ezilandelayo, ngokukodwa ukuba azihambi.
Usulelo lwe-Urinary tract
I-Fosaprepitant Dimeglumine inokubangela nemiphumo ecaleni engaboniswa apha.
Ngaphambi kokuba usebenzise i-Fosaprepitant Dimeglumine, xelela ugqirha wakho malunga neliluhlu lwangoku lweyeza, malunga nemveliso ye-counter (umz. Iivithamini, i-supplements supplements, njl.), I-allergies, izifo ezisele zikhona, kunye nezimo zempilo zangoku (isib. Ukukhulelwa, ukuhlinzwa okuzayo, njl. ). Ezinye izimo zempilo zinokukwenza ufumaneke ngakumbi kwimiphumo engasecaleni leziyobisi. Thatha njengoko ugqirha ugqirha okanye ulandele ulwalathiso olushicilelwe kwimveliso. Isisiseko sisekeke kwimeko yakho. Tshela ugqirha wakho ukuba imeko yakho iqhubeka okanye ibuhlungu. Amaphuzu abalulekileyo okucebisa adweliswe ngezantsi.
Ukucwangcisa ukuba nomntwana
7.Fosaprepitant Dimeglumine Ukusebenzisana kwezidakamizwa
Ukuba usebenzisa ezinye iziyobisi okanye ngaphezu kweemveliso ze-counter ngexesha elifanayo, imiphumo yeFosaprepitant Dimeglumine ingatshintsha. Oku kunokunyusa umngcipheko wempembelelo okanye kungabangela ukuba iziyobisi zingasebenzi kakuhle. Tshela ugqirha wakho malunga nawo onke amachiza, amavithamini, kunye nezongezelelo zokusebenzisa izityalo, ukuze ugqirha unokukunceda ukukhusela okanye ukulawula ukusebenzisana kwezidakamizwa. I-Fosaprepitant Dimeglumine inokusebenzisana namachiza kunye nemveliso elandelayo:
Ngaba i-Fosaprepitant Dimeglumine iphephile ukuba idle okanye ifake xa ikhulelwe?
Nceda uqhagamshelane nogqirha wakho malunga neengcebiso ezithile.
Ngaba i-Fosaprepitant Dimeglumine iphephile xa ilisa?
Kucelwa uxubushe ingozi kunye neenzuzo kunye nogqirha wakho.
Ngaba ikhuselekile ukuqhuba okanye ukusebenzisa umatshini obukhulu xa usebenzisa?
Ukuba ulala usulu, utywala, i-hypotension okanye intloko yesifo njengemiphumo emibi xa usebenzisa i-Fosaprepitant Dimeglumine machiza ngoko akunakho ukhuselekile ukuqhuba isithuthi okanye usebenzise imishini enzima. Omnye akufanele aqhube isithuthi ukuba ukusebenzisa iyeza kukunxininisa, udizzy okanye unciphise kakhulu uxinzelelo lwegazi. Amayeza aphinda acebise izigulane ukuba bangaphuzeli utywala ngamachiza njengoko utswala ngotywala luqinisa ukubuthwa kwesigxina. Nceda ukhangele le miphumo emzimbeni wakho xa usebenzisa iFosaprepitant Dimeglumine. Njalo uqhagamshelane nodokotela wakho ngeengcebiso ezizodwa kumzimba wakho kunye neemeko zempilo.
Ingaba leliyeza okanye umlutha okanye umkhwa owenzayo?
Amachiza amaninzi awafikanga kunye nokuxhatshazwa okanye ukusetyenziswa kakubi. Ngokuqhelekileyo, urhulumente uhlalutya amayeza angaba ngumlutha njengezinto ezilawulwayo. Imizekelo ibandakanya ishedyuli H okanye i-X eNdiya kunye neshedyuli II-V e-US. Nceda uqhagamshelane nephakeji yomkhiqizo ukuqinisekisa ukuba iyeza alingekho ekwahlulelweni olukhethekileyo lwamachiza. Ekugqibeleni, ungazenzi unyango kwaye ukwandise ukuxhomekeka komzimba wakho kumayeza ngaphandle kweengcebiso zogqirha.
Ingabe inganyuswa ngokukhawuleza okanye ngaba kufuneka ndikhuphe kancane?
Amanye amayeza kufuneka adityaniswe okanye akwazi ukuma ngokukhawuleza ngenxa yeempembelelo ezihlawulelwayo. Nceda uqhagamshelane nogqirha wakho ngeengcebiso ezizodwa kumzimba wakho, impilo kunye neminye imichiza onokuyisebenzisa.
tags: bathenge iFosaprepitant Dimeglumine powder, Fosaprepitant Dimeglumine powder
Sarah Tarriha06 / 19 / 2018 kwi-8: 33
Iimveliso zendalo ziye zaphilisa izifo ezininzi kangangokuthi iziyobisi kunye neyeza zonyango. Ndibonile ukubaluleka okukhulu kwemifuno yemvelo kunye nomsebenzi omangalisayo abenzileyo ebomini babantu. Ndifunda ubungqina bomntu kwi-intanethi ngendlela baphiliswa ngayo i-herpes, i-hiv, i-diabetics njl. nguDkt. Ogba Kosu unyango lwamayeza, ngoko ndagqiba ekubeni ndidibane nogqirha kuba ndiyazi ukuba indalo inamandla okuphilisa nantoni na. Ndandifumanelwa ukuba ndine-hiv kwiminyaka eyi-7 edluleyo kodwa uDkt Ogba Kuso wandiphilisa kunye nemifuno yakhe kwaye ndatshela umninawa kunye nomyeni wakhe kuye ngoko nangoko kuba babesele behlanjululwe yi-herpes kodwa uThixo bebazuko, nabo baphiliswa. Ndiyazi ukuba kunzima ukukholelwa kodwa ndingqina lobomi. Akukho bungozi bezama izityalo. Kananjalo naye uphethiloli, uphosa ukubuyisela ukutshatyalaliswa kwemitshato kwaye waphonsa inhlanhla enobungqina ukuze uphumelele kwaye uphumelele ebomini. Nxibelelana noDkt Patrick Young (http://www.aasraw.com/contact/)
I-Platelet Aggregation Inhibitor Ticagrelor (i-274693-27-5) ithengiswa	Ingxelo yoLwazi oluPhezulu loPhando kwi-Homopiperazine